UApple uyawakhanyela amarhe okuvalwa kweTunes kwiminyaka embalwa | IPhone iindaba
OLUHLAZIYIWEYOU-Apple usandula ukukhanyela ukuba uzimisele ukuvala ishishini lokusasaza umculo, uTom Neumayr, isithethi sika-Apple, uqinisekisile ukuRekhoda kwakhona.
Ishishini lokuthengisa umculo, nangayiphi na indlela, litshintshiwe kwiminyaka embalwa edlulileyo, ngakumbi emva kokufika kweenkonzo ezahlukeneyo zomculo. U-Apple uyifumene le nyani ngokulibaziseka okude, okanye ubuncinci ayifuni ukuyibona kwaye yathatha ixesha elide kunokuba kufuneka isabele kwaye isungule eyayo inkonzo yokusasaza umculo, phantse unyaka emva kokumiliselwa kwayo, sele ikwazile ukutsala umdla. ngaphezulu kwababhalisi abazizigidi ezili-13, ababhalisile abaya kukhula ngokukhawuleza ngenxa yesicwangciso esitsha sabafundi esisandula ukwenziwa yinkampani kumazwe aliqela. Esi sicwangciso sabafundi sibonelela ukunciphisa i-50% kwixabiso eliqhelekileyo lomrhumo wenkonzo.
Kubonakala ngathi iApple inesicwangciso sobundlobongela engqondweni ukugqiba ngokupheleleyo ukhuphelo lomculo oluvela kwi-iTunes kwiminyaka emibininjengoko kuxeliwe liDijithali yoMculo weDijithali, icacisa imithombo enxulumene nobudlelwane beshishini lwenkampani neenkampani ezirekhodayo. I-Apple ithathela ingqalelo ukuthoba umthwalo wokukhuphela kwiminyaka emithathu ukuya kwemine, kodwa iingxoxo ngaphakathi kweApple azicacanga. Bayazi ukuba kufuneka ivaliwe kungekudala okanye kamva, kodwa abavumelani ngexesha elifanelekileyo lokuyeka ukuthengisa umculo kwifomathi yedijithali.
Ukugqitywa kokukhuphela umculo kwi-iTunes pIngabanjiswa ngokuxhomekeka kukuthandwa kwe iTunes kwilizwe ngalinye, kuba kuwo onke amazwe akukho umthamo ofanayo wokukhuphela umculo kwifomathi yedijithali. Iminyaka emibini, emithathu, okanye emine, ngalo mzuzu asazi ukuba iApple iyakuthoba ngokupheleleyo iimfama kwinkonzo eqhubeka nokuvumela inkampani ukuba ingene kumakhulu ezigidi zeedola minyaka le, kodwa oko kuyehla ukusukela ekuzalweni komculo ukuhambisa.
Ngokwengxelo kaMark Mulligan, ukuthengiswa komculo kwifomathi yedijithali kuya kusuka kwi-3.900 yezigidi zeedola ngo-2012 kuye ngaphezulu nje kwezigidi ezingama-600 ngo-2019. Ngo-2020, eli shishini liya kuba ngamaxesha angama-10 ngaphantsi kweminyaka esi-8 eyadlulayo. Kodwa esinye isizathu sokuvala le nkonzo siza kuvela kwisiphithiphithi ekubonakala ngathi sibangela umculo othengwa ngabasebenzisi ngomculo okhutshelweyo ovunyiweyo sisicelo seApple Music.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » iTunes » U-Apple uyala amahemuhemu okuvalwa kwe-iTunes kwiminyaka embalwa